IS-ta dalka Libya oo korortay - BBC Somali
IS-ta dalka Libya oo korortay
Masuul ka tirsan sirdoonka Liibiya ayaa BBC-da u sheegay in kumaandoos ka tirsan kooxda la magac baxday Dawladda Islaamka oo ka yimi dhinaca Suuriya iyo Ciraaq ay dalkaasi soo galeen billooyinkii u dambeeyay.
Ismail Shukri , oo ah madaxa laaanta sirdoonka ee magaalada Misrata, ayaa sheegay in ay sidoo kale jireen qulqul dagaalyahanno ka tirsan Daacish.
Waxa uu sheegay in kooxdan uu cadaadis ka haysto bariga dhexe, uuna halkaa ka socdo olole dhanka cirka ah oo ka dhan iyaga, iyo dhanka dhulka oo ay dagaal kula jiraan ciidamada Ciraaq iyo maleeshiyada Kurdiyiinta.
Mr Shukri, ayaa sheegay in Daacish ay u aragto Libya meel ay gabaad ka dhigan karaan.
Dalka Libya, ayaa qalalaase galay tan iyo markii xilka laga qaaday madaxweynihii hore korneyl Gaddafi, sanadkii 2011-kii.